Mpisolo tena (fitsipiteny) - Wikipedia
Ny mpisolo tena dia teny enti-manondro ireo sokaji-mpandray anjara telo ara-pitsipiteny ao amin'ny fifampiresahana, dia ny miresaka sy ny iresahana ary ny resahina. Ny fiteny rehetra dia ahitana ny sokajin-teny mpisolo tena avokoa fa ny isany sy ny endriny ary ny fampiasana azy no tsy mitovy. Zana-tsokajy ao amin'ny mpisolo ny mpisolo tena.
Ao amin'ny fiteny malagasy, ny mpisolo tena ampiasain'ilay miresaka mba hanondrony ny tenany na mahafaoka azy dia ny hoe izaho na isika na izahay; ny mpisolo tena anondroan'ilay miresaka ny olona na zavatra iresahany dia ny hoe ianao na ianareo; ny mpisolo tena ampiasain'ilay miresaka hanondroany ny olona na zavatra ivelan'io firesahana io nefa resahina dia ny hoe izy. Ao amin'ny fiteny malagasy dia misy ny atao hoe mpisolo tena tampisaka izay endriky ny mpisolo tena rehefa atao famenon'ny anarana milaza tompon-javatra (ohatra: henany) na famenon'ny mpamari-toetra na famenon'ny matoanteny milaza mpanao ny asa (ohatra: matiny, vitany).
Miova endrika ny mpamari-toetra amin'ny fiteny sasany arakaraka ny anjara asa sahaniny ao amin'ny fehezanteny (endrika araka anjara asa). Miova endrika arakaraka ny isan'ny olona na zavatra tondroina aminy koa izy ireo (filaza isa). Mety miova koa ny endriny arakaraka ny toetra ara-pitsipiteny ananan'ilay teny soloany (kilahivavy sns).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Mpisolo_tena_(fitsipiteny)&oldid=969255"
Dernière modification le 12 Martsa 2019, à 04:22
Voaova farany tamin'ny 12 Martsa 2019 amin'ny 04:22 ity pejy ity.